दलान नेपाल : जनकपुर बमकाण्ड - १, त्यो को हो ?
विष्फोट पछि अनुसन्धानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको विशेष टोलीले घटनामा सशस्त्र समूहका मुकेश चौधरी र राजनमुक्ति संग्लन रहेको किटानीे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानले किटानी गरेका दुवै अभियुक्त प्रहरीले पक्राउ परिसकेका छन् । यी दुई मध्ये मंसिर १ गते पक्राउ परेका राजन मुक्तिले प्रहरीलाई बयान दिँदै थप आधार दिएपछि मुकेश चौधरी फाल्गुण १९ गते पक्राउ परेपछि मिथिलावासीमा “त्यो मान्छे” पक्राउ पर्ने आशा जागेको छ ।
धनुषा प्रहरीलाई राजन मुक्तिले दिएको बयानमा भनिएको छ—मेरो नेतृत्वमा रहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन समूह), अजुर्न सिहं प्रकाश विद्यार्थी भनिने मुकेश चौधरीको तराई जनतान्त्रिक पार्टी, विद्यार्थी लिबरेसन फ्रन्ट, नागराज भन्ने उमेश तिवारीको तराई कोब्रा, राजन प्रताप भन्ने प्रफुल यादवको मधेस मुक्ति टाइगर समेतको संयुक्त बैठक लखनउको दयालपुर स्थित मुकेश चौधरीको कोठामा (बस्यो) । (त्यहाँ) बैठक बसी (आपसमा) कार्यगत एकता गर्ने तर एक आपसमा विलय नहुने गरि कार्यगत एकताका (लागि) सहमती गरि (हालसम्म) भए गरेका कामहरुको सामूहिक जिम्मेवारी लिने निणर्य भइकोमा ...सोही क्रममा तराईमा भूमिगत पार्टीको अस्तित्व देखाउन र आतंक मच्चाउनको लागि धनुषामा बम बिष्फोट गराउने कुरा उठी हामीहरुले बम बिष्फोट गराउने निणर्य गरेको थियौ । योजना मुताबिक म समेत मुकेश चौधरीले बिष्फोटक पदार्थ पठाई हाम्रा कार्यकर्ताहरु परिचालन गरि मिति २०६९।१।१८। गतेको रामानन्द चौकमा भएको शान्तिपूर्ण धर्नामा बम बिष्फोट गराएकोमा सो बिष्फोटमा ५ जनाको मृत्यु, ३२ जना घाईते भएका थिए । घटना पश्चात समाज (जनकपुरमा) आतङ्क मच्चाउन सकिएकोले, मैले तत्काल प्रयोग गरेको ०० ९१८५२१४२७५५५ (मोवाईल) नम्बरबाट जनकपुरका पत्रकारहरुलाई कmक र फोन गरि घटनाको जिम्मेवारी लिएको थिएँ, उक्त घटना पश्चात हाम्रा कार्यकर्ता र विष्फोटक पदार्थ समेत बरामद र पक्राउ गरियो ।
राजन मुक्तिले दिएको यही बयानको आधारमा धनुषा प्रहरीले मुकेश चौधरीलाई अभियुक्त बनाई सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।
हाल प्रहरीको नियण्त्रणमा रहेका यिनै मुकेश चौधरीले जनकपुर विष्फोट काण्ड भएको ३ महिनापछि जनकपुर बजारमा तीनवटा अडियो रेर्कड वितरण गरेका थिए । उनले आफुसंग वार्ता गर्ने मानिस प्रति प्रहरी र जनकपुरवासीको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका थिए ।
त्यसमध्येको पहिलो अडियो रेकर्डमा एकातर्फ मुकेश बोलेको प्रष्ट चिनिन्छ भने अर्को तर्फबाट बोल्ने मानिसलाई पहिचान गर्न प्रहरी लागिपरेको छ । जनकपुर विष्फोटमा पर्दा पछाडि सक्रिय रहेको “त्यो को हो” ? र त्यसले विष्फोटमा खतम् पार्न चाहेको “उ” को हो ? यही प्रष्ट पार्नु नै नेपाल प्रहरीको गहन जिम्मेवारी देखिएको छ ।
विष्फोट हुनु भन्दा केही दिन अगाडि मैथिली भाषामा गरिएको संवादको अडियो रेकर्डको नेपाली रुपान्तरणमा मुकेशले सङ्केतमा “उ” भनेर मूख्य शिकारलाई टार्गेटमा पार्ने प्रयास गरेका छन् र त्यहाँ “मिस” हुने अर्थात “उ” फुत्कने संभावना भएको चर्चाका साथै धेरै क्षति हुन सक्ने चिन्ता पनि गरिएको छ ।
मुकेश चौधरी ः उसलाई समान लिएर त्यहाँ जानु भन्या छु, चेकसेक त गर्दैन ? पक्रने सम्भावना त हुँदैन ?
दोश्रो वक्ता ः उसलाई तपाईले के के भन्नुभयो ?
मुकेश ः पछाडिवाट जानु भन्या छु । चारैतिर गेट छ । त्यहीँबाट “उ“ भएको तिर गएर उनको छेउमा राखिदिनु भन्याछु ।
दोश्रो वक्ता ः साईडबाट गर्नु भन्नु । भीडमा नराख्नु, छति धेरै हुन जान्छ ।
मुकेश ः त्यसो भए कि त ब्याक गर्नुप¥यो । कि त भीडबाटै जानुपर्छ । एउटा कुरा गर्नु प¥यो । नत्र उ पनि कन्फ्यूज हुन्छ ।
दोश्रो वक्ता ः होईन, त्यहाँबाट “उ“ निस्केपछि उसको छेउमा गएर राख्नु भन्नु न ।
मुकेश ः त्यसरी कसरी हुन्छ, उ जहाँ छ, त्यही भीडमा गएर राख्न लगाईदिन्छु ।
दोश्रो वक्ता ः होईन होईन, त्यो ठीक हुँदैन । त्यसले धेरै छति हुन्छ ।
मुकेश ः त्यसरी कहाँ हुन्छ ? त्यसलाई कुनै एउटा कुरा भन्नु प¥यो । नत्र उ पनि सशंकित हुन जान्छ ।
दोश्रो वक्ता ः त्यसरी हुँदैन, तपाई बीरेन्द्रसंग ईन्फरमेशन लिनु त ।
मुकेश ः म बीरेन्द्रसंग लगातार सम्पर्कमा छु ।
दोश्रो वक्ता ः बीरेन्द्रसंग तपाई सम्पर्कमा रहनु । उसलाई त्यहाँ स्टयान्डबाई, त्यहीँ राख्नु । सिक्वेन्स मिलेपछि म भन्छु ।
मुकेश ः यसरी त ”मिस” हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
दोश्रो वक्ता ः हो, ”मिस” हुने चान्स धेरै छ ।
मुकेश ः घटनाको जिम्मा लिँदा हुँदैन ?
दोश्रो वक्ता ः होईन, होईन । त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन । तपाई कस्तो गलत कुरा गर्नुभयो ।
मुकेश ः छेउमा रिमोट छ, एक सेकेन्डको खेला हो । के गरौं ? त्यहाँ कम से कम १५० भन्दा वढी मानिसहरु छन् ।
दोश्रो वक्ता ः छोड दिनु आज ।
मुकेश ः त्यही त “उ” त्यहाँबाट निस्केपछि सिधै होटल पसिहाल्छ नि ।
दोश्रो वक्ता ः छोड दिनु, धेरै छती हुन जान्छ । यिनीहरु फेरि भोलि बसिहाल्छ नि ।
मुकेश ः उसो भए आईतवार गरौंला ...।
दोश्रो वक्ता ः भोलि नै बस्ला नि फेरि । मिलाएर कति बेला उपयुक्त हुन्छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्छ ।
यस संवादमा विष्फोट गराउनेहरुले कुनै एकजना “उ”लाई मात्र मार्न चाहेको बुझिन्छ । यो योजना आईतवार अघिकै थियो भन्ने पनि बुझिन्छ । तर आदेशकर्ता दोश्रो वक्ताले चाहेको जस्तो “सिक्वेन्स” मिल्न नगएर धेरै जनाको ज्यान गएको देखिन्छ । त्यति मात्र होईन, आदेशकर्ताको चाहना चाहिँ धर्ना कार्यक्रमलाई नै उपयोग गर्ने रहेको देखिन्छ । आदेश माग्ने मुकेशले चाहिँ बमले मानिस उडाउनुलाई सामान्य काम ठानेको देखिन्छ । “घटनाको जिम्मेवारी लिए त पुगिहाल्छ नि” भनेर मुकेशले आदेशकर्तालाई सम्झाउनुलाई चानचुने आपराधिक मानसिकता मान्न सकिँदैन । अन्तमा उनीहरुवीच आईतवार काम फत्ते गर्ने सहमति हुन्छ ।
जनकपुर विष्फोट २०६९ बैशाख १८ सोमवार हुन गयो । त्यस दिन रामानन्दचोकमा १५० जना भन्दा बढी मानिस शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका थिए । उनीहरु मिथिला राज्यको समर्थनमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका बेला विष्फोट हुन गएर मिथिलाका होनाहार सपुतहरुको ज्यान गयो । घटना हुनु भन्दा केही समय अघि माथिका दुवै पात्रले फेरि संवाद गरेका छन् । यस संवादमा पनि उही आवाज छ । जसमा मुकेश चौधरीले “घटना हेर्न टीभि खोलेर बसिरहनु“ भनेर ”त्यो मान्छे”लाई आग्रह गरेको छ ।
दोश्रो अडियो रेकर्डको पूर्णांश....
त्यो व्यक्तिः म कति बजेसम्म टीभि निर बसिरहुँ ?
मुकेशः आज तपाई कन्टिन्यू बसिराख्नु, कन्टिन्यू...।
दोश्रो अडियो रेकर्डले कोही मान्छे टीभिमा घटना हेर्न उत्ताउलो भैरहेको देखिन्छ । उसको उत्ताउलोपनलाई शान्त पार्न मुकेशले “आज” शब्द प्रयोग गरेर शान्त पारेको छ । “त्यो मान्छे”बारे मुकेशले अब के बोल्छ, कसैलाई थाहा छैन, तर उसले यस अघि नै बोल्नु पर्ने जति बोलिसकेको छ । “त्यो मान्छे”को खोजी गर्न मिथिला राज्य संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाईसकेका छन् । घटानाले कुन मोड लिने हो, देशभर नै प्रतीक्षा छ ।
(यससंग सम्बन्धित अडियो रेकर्ड तलको लिकंमा सुन्न सक्नु हुन्छ ।)